Markab dagaal oo cusub oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa isticmaali doona Linux | Laga soo bilaabo Linux
Ciidanka Mareykanka oo kaliya maahan ciidanka, laakiin sidoo kale Ciidanka Cirka, Pentagon, ka Badda; Waxay aad iyo aad uga fiirsadaan waxyaabaha kale ee ka furan Source Open, ee Software-ka Bilaashka ah.
Warkan wuxuu iga soo gaarayaa meelo dhowr ah, waxaa dhacda in markab cusub oo ka tirsan Ciidanka Badda ee Mareykanka (the USS Zumwalt (DDG 1000) $ 3.5 trillion) marka ay biyaha ku dhufato dabayaaqada sanadkan waxay noqon doontaa mid safka hore kaga jirta arimaheeda, iyadoo soo bandhigaysa howlo iyo awoodo fara badan (stealth, firepower, iwm) oo maraakiib badan aysan maanta iswaafaqi karin. Laakiin haye ... halkan uma joogno inaan ka hadalno "qalabka" ma waxaan nahay? 🙂
Doontaan waxaa jidh ahaan amray James Kirk (Yes Haa haa, sidaad u akhrido, si la mid ah kabtanka Shirkadda ka socota Star Trek LOL !!) iyo gudaha 'ku orod' noocyo kala duwan oo Linux ah oo ku saabsan sheybaarkooda 'IBM blade server', waa aragtidayda, waa tallaabo horay loogu qaaday u doodayaasha Barnaamijka Bilaashka ah. Haa saaxiibo, horay usocda, maxaa yeelay waa inaan xasuusano mid kamid ah xorriyadaha barnaamijyada aan difaacno oo aan inbadan isticmaalno:
Xaqa isticmaalka, qof kastaa wuu isticmaali karaa softiweerka iyada oo aan la takoorin.
Software-ka laftiisu ma fiicna mana xuma, aan dhahno Linux waa sida mindida jikada, gacmaha wanaagsan waxay ku noqon kartaa qalab aad u fiican oo waxtar leh, laakiin gacmaha kale waxay ku noqon kartaa hub dil. Software-ka Bilaashka ahi wuxuu leeyahay 4-ta xorriyadood ee aan wada ognahay, kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa kor lagu soo sheegay (macno ahaan maahan, laakiin taasi waa fikradda udub-dhexaadka ah) si qofkasta u adeegsan karo, wax uga beddeli karo, ula qabsan karo, xittaa haddii aysan inyar oo la mid ahi taasi ahayn saaxiibo sax ah .
Horaan u sharaxay kahor faallooyinkayga ku saabsan maqaalka Ciidanka Badda ee Mareykanka ayaa isticmaali doona Linux.
Xaqiiqooyinka ayaa ah kuwan:
Barnaamijka gaarka loo leeyahay looma isticmaalo noole muhiimad gaar ah leh.
Software bilaash ah ayaa loo isticmaali doonaa halkii.
Tani waxay kordhin kartaa tayada darawallada ama tirada dadka horumariya Linux.
Waxay ka dhigi kartaa ururro kale ama waddamo inay ku sharfaan SWL xarumahooda.
Taasi waa sida aan u arko.
In Mareykanku u adeegsan doono ujeeddooyin dagaal? ... Miyaanay la mid ahayn sidii aad horeba ugu samaysay barnaamijyada gaarka loo leeyahay?
Runtu waxay tahay in dowladaha adduunku u adeegsadaan Linux ujeeddooyin hub ah wixii aan weligeen ku riyoonaynay, waa run, laakiin meel kasta oo laga saarayo software-ka lahaanshaha oo software bilaash ah meeshiisa lagu hormarinayo, ugu yaraan dabcan, habka aan u arko.
Haddii 'xorriyadda' 5aad lagu daro Software Bilaash ah oo oran lahaa wax la mid ah: «ma isticmaali kartid softiweerkan haddii aad qaraabo la tahay, haddii aad Taalibaan tahay, haddii aad argaggixiso tahay ... iwm»… Markaas, miyay run ahaan lahayd Software Free?
Sikastaba, waxaan rajaynayaa in maqaalkani soo saaro fikrado ujeedo leh, muran ama maya; Taasi maahan su'aal, maahan in lagu xanto xagjirnimada iyo in si sax ah loo bartilmaameedsado, in la noqdo mid macquul ah maxay kula tahay
Macluumaad dheeri ah gudaha ArsTechnica y SlashGear
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Markab dagaal oo cusub oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa isticmaali doona Linux
67 faallooyin, ka tag taada
Ma kugula talinaysaa bog sida desdelinux ama muylinux laakiin taasi waxay ku qoran tahay Ingiriis taasna waa caan oo si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa?
Ku jawaab nestor
Phoronix waa bogga leh waxyaabaha ugu cusub ee ku jira Linux ee jira.
Wanaagsan, waa wixii aan sugayay, in doontaydu tahay Linux ku habboon
Ku jawaab troll
hahahahahaha sidoo kale waan sugayay
Doon 100% la jaan qaada openarena haha
Xuquuqda adeegsiga "softiweerka bilaashka ah, (qof kastaa wuu isticmaali karaa softiweerka isagoon la takoorin). Waa in aan la xadidin, waxa kaliya ee ay tahay in la badalo ayaa ah tusaalaha gringos, oo dagaal u gala sidii ay "u badbaadin lahaayeen" dhaqaalahooda.
Waxaan gacanta saaray qalbigayga waxaanan ku heesaa heesta ciidanka badda!
Heestan ayaa madaxayga ku soo dhacday
Maan ogeyn inaad gali karto youtube videos 😮
Hhahahaa aad ufiican xd
Nacalad, sida aad u sheegi karto inaan akhriyay goor dambe (mid baa banaanka ka soo baxay) tan iyo markii aan dhigayay, xitaa in loo beddelayo Linus iyo Stallman XD
Nasiib darro in rakibidda Linux ay qayb ka tahay hubka dagaalka.
Waxaan rajeynayaa inay ugu yaraan wax ku biiriyaan firida ...
Dagaaladii saaxiibkey qaaliga ah ayaa sabab u ah inaad maanta haysato kumbuyuutar, taleefano gacmeedyo, gawaari, diyaarado, softiweer, internet iyo wax dheer iwm ... dhamaan raaxadaas oo dhan waxay markii hore ka shaqeeyeen furimaha dagaalka markii dambena waxay noqdeen adeegsiga bulshada (dagaalka waa ceeb xaga aragtida aadanaha, laakiin waa barako xaga horumarka tikniyoolajiyadda).
Run maahan. Aqoonta farsamada looma kala saari karo mid ciidan ama mid shacab ah. Baahida militari waxay kicin kartaa horumarka tikniyoolajiyadeed ee goobaha rayidka, ciidamada qalabka sidaana xaalado badan ayay ahaayeen "isticmaaleyaashii ugu horeeyey" (maxaa yeelay waxay ahaayeen ikhtiraac qaali ah), laakiin tan macnaheedu maaha in dagaalada ay yihiin kuwa dhaqaajiya horumarka farsamada. Microchip, nalka korontada ama taleefanka looma abuurin dagaal ama sababtoo ah dagaal ayaa dalbaday. Sannadaha nabadda, tikniyoolajiyaddu waxay sii wadaa inay horumariso iyadoon maalgalin milatari lagu lug lahayn.
Dagaalladu waa in lagu qabsado kheyraadka, waa nooc dhac ah oo xoog lagu haysto. waxa kaliya ee ay soo saaraan waa dhimasho iyo rafaad.
Haddii aan loo isticmaali karin xumaanta, maahan barnaamij bilaash ah. Xusuusnow liisanka JSON.
GNU / Linux, GNU / Linux… maaha Linux, KZKG ^ Gaara. LOL
Dhibaatada ayaa ah in ay u adeegi doonto in la sameeyo dil, sida uu sheegayo qoraaga qoraalkan:
KZKG ^ Gaara dixit:
Software-ka kaligiis ma fiicna mana xuma, aan dhahno Linux waa sida mindida jikada, gacmaha wanaagsan waxay ku noqon kartaa aalad aad u fiican oo waxtar leh, laakiin gacmaha kale waxay ku noqon kartaa hub dil.
Waa waxa ugu fiican ee aan lagu qaadin xagjirnimada iyo in si sax ah loo noqdo ujeedo, noqoshada waaqici. 🙂
FSF Taliban ayaa la ogaaday. LOL
HAHAHAHAHA sifiican, sida iska cad waan ogahay in qaabka saxda ah oo dhameystiran uu yahay GNU / Linux laakiin ... kaalay, fikirka la Linux kaliya waa la fahmay, ma arko baahida loo qabo in lagu daro GNU / markasta 🙂
«Sida uu sheegayo qoraaga gelitaankan» «- Taasi way ila jirtay, miyaanay ahayn? Waa hagaag haa Tina gacaliye, haddii markabku gantaal u diro xero tababar oo ku taal waddan carbeed ... waa dil, aniga aragtidayda waa dil marar badan illaa loo baahdo laakiin haye, kama fiicnaan inaan sii wado in hadhow dadka qaar iigu yeeraan an xagjir ah 😀
Xagjirnimada ma ahan saaxiib, moron .. 😀
Kama fiicni inaan kaaga jawaabo, in keligay igu filan yahay inaan hubeeyo dagaal nukliyeer halkan 😛
«… Kaalay, fikradda leh Linux waa la fahmay oo keliya, ma arko baahida loo qabo in lagu daro GNU / had iyo jeer :)»
Maya, taasi adiga kuuma aadeyso, waxay u tagtaa kuwa iyagu ka papist ka badan Pope ka ...
"Haddii markabku gantaal u diro xero tababar oo ku taal waddan Carab ah ... waa dil, aniga aragtidaydu waa dil marar badan illaa inta looga baahdo"
Taasi adiga ayey ahayd. Hagaag, anigu waxaan ahay Yankee waxaana la rabaa inaan iraahdo "haa haa, in la dilo argagixisada Taalibaan waa xaq sababta oo ah argagixiso ayaa la dilaa" sikastaba ma aaminsani nooc kasta oo dil ah waxaanan aaminsanahay in dhamaan noocyada dagaalka ay yihiin wax laga xumaado. Xitaa waxaan ka soo horjeedaa xaqiiqda ah in gobolada qaar ee dalkayga ciqaabta dilka wali sharci ahaan lagu dabaqo.
Xukunkaaga waxaa looga faallooday ma ahan inuu kugu caayo wax laakiin sababta oo ah, inta aan ogahay, softiweerka looma adeegsan doono hagidda gantaallada ee waxaa loo adeegsan doonaa nidaamyada amarka adag ee gujiska badda. Xaqiiqdii, shaki iigama jiro in nidaamkan uu dhawaan yeelan doono adeegsiga shacabka, oo ah mid aad u wanaagsan.
Ugu dambayn, ha u oggolaan in Elav uu ku koontaroolo, hana u diidin xoogsheegashada internetka.
LOL iyo inbadan LOL
…. Aakhirka sidan ayaan ku dambayn doonaa Galician oo ka difaacaya laydhkiisa Ciidanka Mareykanka.
Codka fiidiyowgaas waa "been abuur": http://citas.javier-carrete.com/post/11837055844/leyenda-urbana-del-faro-a-853-de-finisterre
Hagaag, uguyaraan kaftanka sifiican baa loo qabtay. Si la mid ah, waxay iga qoslisay sidii hore oo kale.
Hadal la'aan baan ahay
Runtii markabku ma wuxuu ku kacay $ 3? o_O
La yaab ma leh in Mareykanku uu leeyahay deyn aad u badan.
Waxay ahayd waqti uun kahor intaanay dhicin ... inkasta oo aan u malaynayo inay hore u soo gudbtay, laakiin maadaama ay hadda marayaan xaalad miisaaniyad-darrada, waa macquul in isbedelada sidan oo kale ah ay qaataan muhiimad weyn. Sida markii NASA ay ka guurtay MS una guurtay Linux.
Yurub gudaheeda waxaan ku leenahay deyn ilaa qoorta waxaana si dhib yar u haysannaa ciidan hufan ... xD
Cilmiga hawada dijo
Bilyan oo Ingiriis ah = 1000 bilyan oo Isbaanish ah
Khaladka guud marka la turjumayo ...
DanielC wuxuu yiri:
“Runtii Markabku ma wuxuu ku kacay $ 3? »
Maya. Waxay ku baxday saddex bilyan iyo badh doolar. Waddankeyga "hal bilyan" wuxuu u dhigmaa "kun."
Waxaan caddeynayaa inuu ka hadlay malaayiin: hal milyan = hal bilyan
Dalkayga "hal bilyan" wuxuu u dhigmaa "kun".
Badanaa erayga billion u tarjumay bilyan iyo / ama bilyan. Sheeg kun waxay u egtahay inay u egtahay mid jahwareer badan, marka ereyada "bilyan" iyo / ama "balaayiin" ayaa u muuqda kuwo aan mugdi ku jirin.
Waxay u muuqan kartaa jahwareer in la qoro "kun" laakiin waa sax in sidaas la sameeyo. Xitaa dukumiintiyada bangiga - sida warqadaha dhigaalka ama jeegaga - waxaa lagugula talinayaa inaad ku qorto sidan si looga fogaado in shaxdan wax laga beddelo. Ka soo qaad in aan qoro jeeg gacanta lagu qoray oo ah $ 1,000 oo aan qoro Kun Pesos 00/100 MN. Qof kasta ayaa u rogi kara midkaas 4 oo uu ku qori karaa Afar ka hor Kun.
In ka badan oo aan si khaldan loo qorin waxaad sameyso waa cadeyn sidoo kale waxaad ku dartaa qaab kale oo aad u sax ah oo loo qoro tiradaas: Millardo. Mahadsanid.
Dhib malahan. Ma aanan aqoon waxa sidan loo dhigayo.
Jidka, waad ku mahadsan tahay ammaanta.
Lacagtii ay kaydsadeen iyagoo aan iibsanin liisanka daaqadaha, ayay ku iibsadeen doonta XD
wax ku biirinta aadka u wanaagsan iyo illaa iyo inta fikradda ciidanka badda ee ah adeegsiga softiweer bilaash ah ujeeddooyinka hubka ay leeyihiin faa'iidooyinkiisa iyo khasaaradiisa
#Haddii 'xorriyad' 5aad lagu daro Software Bilaash ah oo oranaya wax la mid ah: "ma isticmaali kartid softiweerkan haddii aad xiriir la leedahay hubka, haddii aad Taalibaan tahay, haddii aad argagixiso tahay ... iwm" ... markaa , runti ma waxay noqon lahayd Software Bilaash ah?
Way fiicantahay sida ay tahay. Intaa waxaa dheer, maaraynta liisanka waxay noqon doontaa mid aan macquul ahayn.
Maxaa wanaagsan iyo waxa xun? Waxay kuxirantahay hadba halka aad wax ka eegto.
Hubka ma fiicnaan lahaa in laga difaaco weerar, tusaale ahaan, markabkaas kore? Waa ayo argagixisadu? Kuwa argagixisada keena ... Waa kuma?
Kawaran haddii bilyaneer bangi ah uu ka argagaxo in faa iidadiisa aaney sii kordheynin uu dhibane u noqon lahaa argagixisanimo?
Aynu soo qaadanno barnaamaj vegan oo ka argagaxsan in xoolaha loo dilo cunto iyo / ama dhar. Miyey shuruudahaaga wanaag iyo xumaan noqon doonaan kuwa shardi ka dhigaya isticmaalka "barnaamijkaaga bilaashka ah"?
Ama aqoonyahan deegaan. Ama dibi dagaalyahan ighter
Ama aniga, ama midkeen kasta, oo wata fikradaheena, xaaladaha iyo cuqdada
Caddaalad ma ku noqon doonnaa go'aaminta "xorriyadda" barnaamijka bilaashka ah ee mamnuucaya?
Waxay noqon laheyd cibaado laawe.
Ku jawaab manolox
Haa, waad saxantahay Sidoo kale waa in CIA ay adeegsato softiweer si ay u basaasaan waxa aan basaasnimada aheyn iyo Anonymous software si ay u jabsadaan. Labada xaaladoodba waxay ku kacaysaa wax ka baxsan sharciga labada dacwadoodna waa kuwo anshax ahaan iyo anshax ahaanba shaki la gelinayo. Laakiin qaar ayaa u sacabiya, mid mid ama mid kale qiil u sameeya oo xitaa u hiiliya oo u roga halyeeyo ... wax walboo waxay kuxiran yihiin aragtida.
aragtida waxay kuxirantahay qofka meydka dhigo. : /
Xaaladda jabsiga, waxaa jira hawo loo yaqaan 'BackTrack', oo ah hargo ay ku jiraan tiro badan oo ka mid ah yutiilitida korantada. Kiiska tijaabada amniga ee shabakadda wireless (ama kan ka soo horjeedka ah), waxaa jira Beini (in kasta oo loo adeegsado adduunka laambadda).
Sikastaba, uma arko baahida loo qabo in la isticmaalo distros-kan maxaa yeelay ma qorsheynayo inaan ku tiirsanaado jabsiga nolosheyda oo dhan, sidoo kale uma hungoobo sida CIA-da oo kale.
Qofka wax jabsada ee dambi gala waa wax iska caadi ah, laakiin dowlad marka ay sameyso, waxaan u arkaa wax aan la aqbali karin-
Fadlan Manolox, wax lacag ah kuma fadhiyo in la sameeyo xiritaan sheegaya in loo isticmaali maayo in lagu dilo dadka.
Mise waxaad ii sheegi doontaa inay tani xadgudub ku tahay "xorriyadda," xorriyadda dilka? maxaan ka hadlaynaa
Masnolox oo difaacaya xorriyadda dilka
Haye, ha ku mashquulin Gringuitos, waxay nasoo siiyeen kubbadda cagta adduunka (Mexico).
Waxayna kaa qaateen New Mexico iyo Texas
Istro ka shaqeysa markabkaas wuxuu noqon doonaa RHEL, taas oo hubaal ah in maalgashigu yahay gorgortan dhameystiran marka loo eego ruqsadaha Microsoft.
Waa war wanaagsan, in kastoo aanan u maleynaynin in Kuuriyada Woqooyi ay bilaabi doonto abuurista diintooda.
Waxay kaliya u isticmaalaan Linux si ay awood ugu yeeshaan inay la jaanqaadaan OS baahidooda, maxaa yeelay waxay ku kacdaa wax aad uga yar iyo sababta oo ah nidaamyada kale ma beddeli karaan Wax badan kama daneeyaan falsafada magaca GNU / Linux uu ku qaadan karo.
Markaa maahan sida horumar la sameeyay midkoodna, aniga ahaan warkani waa mid iga xasaasi ah wax kasta oo kale.
Ku jawaab jawaasiis
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, waxaan khiyaameeyay qofka u maleynaya inay wax la wadaagayaan waxa ay ku sameynayaan jirkooda.
Waa la mid, haddii Red Hat ay ka jaban tahay tan Microsoft.
Xorriyadda loola dhaqmo ujeedo militari waxay kaliya noo keeni kartaa nasiib darro. Dhinacyadeeda anshaxeed waa kuwo aan shaki ku jirin in warkani uu iga xumaado, xanuunka oo u muuqda mid xagjir ah.
Ku jawaab Xeip
Ma keento wax nasiib darro ah ..., ka dib oo dhan, haddii aysan u ahayn Linux, waxay isticmaali lahaayeen xalka kale ee ku saleysan unix, sida solaris, hp ux ama yaa garanaya waxa.
igu soo noqo elestoimago bal eeg taas
Hagaag, sida badmaaxyadu u leeyihiin inay u kala jaan qaadaan, waan maarayn doonnaa.
Hadda Linux ayaa loo isticmaali doonaa in lagu dilo: - /
Xitaa haddii ay beddelaan barnaamijyadooda, waxyaabaha sidan oo kale ah miyaa ku sii dhacaya iyaga?
Ku jawaab zerberros
Qosolka dib ugama dhigin maxaa yeelay runta, qaabka isla weyni ee ciidamada qalabka sida ee Mareykanku sameeyeen waa doqonimo.
Waxaa la gaadhay waqtigii dadka adduunku ay iska saari lahaayeen indho shareerka W $ oo ay u arki lahaayeen fursadaha weyn ee GNU / Linux
Aniga ahaan, waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan kiiskan waa adeegsiga xarumaha xogta qaab dhismeedka ah iyo qalabka loo qeybiyo, kaas oo lagu dabaqi karo naqshadaha u baahan helitaanka aadka u sarreeya. Waxaan kula talinayaa qof kasta oo akhrin kara maqaalka asalka ah si uu sifiican ugu fahmo.
Runta marka la sheego, taasi waa waxa runtii indhahaygu qabteen.
Xiiso Leh 🙂
Haatan Mareykanku wuxuu GNU / Linux u adeegsan doonaa dagaal SADDEXAAD EE ADDUUNKA AH (Cadowgooda liiska ku jira waa SYRIA, IRAN, WAQOOYI KOREA, anigu meesha kama saarayo CHINA + RUSSIA).
Gaara sida had iyo jeer u difaaco boqortooyooyinka ...
Ubuntu Ka Dib rakib: Wax walba oo aad Ubuntu gujiso!